JEREO ireo hazo lava, voninkazo tsara tarehy ary tendrombohitra avo ireo. Tsy mahafinaritra ve eto? Jereo ny fomba fihinan’ilay diera eo amin’ny tanan’ilay zazalahy kely. Ary jereo ny liona sy ny soavaly mitsangana erỳ amin’ny ahi-maitso erỳ. Tsy ho tianao ve ny hipetraka ao amin’ny trano iray eo amin’ny toerana toy izao?
Hataon’i Jesosy izay hitrangan’izany fiovana mahatalanjona izany. Fantatrao ve hoe rahoviana? Eny, aorian’ny fanadiovany ny tany amin’ny faharatsiana sy ny olona ratsy fanahy rehetra. Tadidio fa fony i Jesosy tetỳ an-tany dia nanasitrana ny olona tamin’ny karazan’aretina rehetra, ary nanangana olona tamin’ny maty mihitsy. Nataon’i Jesosy izany mba hampisehoana izay hataony manerana ny tany rehetra rehefa ho tonga Mpanjakan’ny fanjakan’Andriamanitra izy.
Hevero ange fa tena hahatalanjona izany paradisa vaovao eto an-tany izany! I Jesosy, miaraka amin’ny sasany amin’ireo hofidiny, dia hanapaka any an-danitra. Ireo mpanapaka ireo dia hikarakara ny olona tsirairay avy eto an-tany ary hanao izay hahasambatra azy. Aoka hojerentsika izay ilaintsika hatao mba hahazoana antoka fa homen’Andriamanitra antsika ny fiainana mandrakizay ao amin’ny paradisany vaovao.
Hizara Hizara Paradisa Vaovao ho eto An-tany
my tant. 115